Dowladda Soomaaliya oo ka jwaabtay go’aan kasoo baxay ICJ | Somsoon
Home WARAR Dowladda Soomaaliya oo ka jwaabtay go’aan kasoo baxay ICJ
Dowladda Soomaaliya oo ka jwaabtay go’aan kasoo baxay ICJ
Maxkamada ICJ ayaa go’aamisey in dhageysiga dacwada badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya dib loo dhigay.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in dowladdu ogoshahay go’aanka maxkamada oo noqon doona mid kama dambeys ah.
Waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay ku qanacday go’aanka Maxkamadda, islamarkaana ay diyaarsan doonto qorshaheeda xilliga loogu tala galay in la yimaado Maxkamadda ee ku cad dib u dhigista maanta lagu dhawaaqay.
“Dowlada Soomaaliya hore ayay u diiday in dib loo dhigo dhagaysiga dacwada balse aysan dowladu ka weyneyn go’aanada maxkamada.”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku xigeen Mahdi Guuleed.
Hore ayay maxkamada ICJ dib u dhigtey dhagaysiga iyadoo sheegtay in 4-ta bisha Noofembar ee soo socota lagu waday in la dhageysto dacwadda labadda dal, laakiin dowladda Kenya si cad uga cudurdaaratay.
Article horeDad loogu aar gudayo Cabdirashiid Janan oo lagu xiray Balad Xaawo
Article socoda Macalimiinta wadanka oo lagu amray in ay is diiwaan geliyaan